Tahaka Izao Ny ‘Solomaso Mpanavakava-bolonkoditra” Raha Atao ao Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Avrily 2017 5:33 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Português, Français, русский, Italiano, English
Sary: Animaction Decks / YouTUbe
Tamin'ny Janoary 2016, namoaka sarimihetsika fohy mitondra ny lohateny hoe “Racist Glasses,” na “Solomaso mpanavakava-bolonkoditra” ilay Amerikana mpanao hatsikana antserasera Rudy Mancuso, izay mampiseho lehilahy iray nahita solomaso ka mahatonga izay olona hita ao amin'ny solomaso ho hita amin'ny fitsarana an-tendrony ataon'ny mpanavakavam-bokoditra. Lasa ninja ny lehilahy Aziatika, lasa mpanankarena mieboebo ny olona fotsy hoditra, ary niova ho mpandihy mihiakiaka mitafy sombrero ilay mampiseho an'i Mancuso (lehilahy Latina) tenany.
Tamin'ity herinandro ity, namokatra ny voatra manokana avy tamin'ny lahatsarin'i Mancuso ilay Rosiana mpanentana, Alexey Yurevich — sarimiaina mitovy toerana saingy amin'ny endrika Rosiana ihany.
Ny lahatsarin'i Yurevich mitondra ny lohateny hoe “Solomaso mpankahala mpiray firenena” dia mampiseho lehilahy Rosiana iray manao izany solomaso majika izany ihany koa ary manova ireo vondrona ara-poko isan-karazany amin'ny fitsarana an-tendrony amantarana azy ireo.
Raha nametaka ny solomaso sy nijery manodidina izy, nandihy Lezginka tampoka ny vondron-dehilahy Kaokaziana Tavaratra mijorojoro am-pilaminana teo amin'ny manodidina ary niomana hiherisetra amin'ny ondry iray. Lehilahy Aziatika Afovoany iray mipetraka am-pahanginana ao amin'ny sezan'ny zaridaina no hita eny rehetra eny ankehitriny, manafangaro simenitra hanamboarana moron-dalana. Fotoana fohy taoriana, rehefa nanaovana indray ny solomaso, [poritra izy ka namany]. Nivadika ho lehilahy Arabo ilay olona teo akaiky, izay mitifitra amin'ny basy sy manapoaka baomban'akanjo. Avy eo izy nitodika any amin'ilay lehilahy hita ho Okraniana, izay hita mitsambikimbikina manao ny kodiarana ho fehikibo sy ny fanatatavanana ho fiarovan-doha. Heno tsara ny hiakia-tarigetra, ary nanipy cocktail Molotov izy — vonam-pifandraisana amin'ny revolisionera Maidan.
Tamin'io fotoana io, nihazakazaka hody any an-trano hijery fitaratra ao amin'ny efitra fandroany ilay lehilahy nahita ny solomaso, ka nahita ny tenany lasa Rosiana be volombava mpisotro toaka mitafy ushanka sy mihazona tavoahangy vodka.
Saika mitovy tanteraka amin'ny sarimihetsika “Solomaso Mpanavakava-bolonkoditra” an'i Mancuso ny sarimiaina, saingy ao an-toerana ao Rosia ny fitsarana an-tendrony aseho.
Tamin'ny antsafa iray niarahana tamin'ny tranonkala TJournal, nilaza i Yurevich fa nanova ny lohatenin'ny filma mihitsy izy mba hampifanaraka izany amin'izay hitany fa toetra mampiavaka ny fifanandrinana ara-poko ao Rosia. “Ao amin'ny [lahatsariko], marina kokoa ny filazana hoe ahoana ny fomba fahitan'ny nasionalista ny zava-drehetra,” hoy izy nanazava ny antony nanesorany ny voambolana “mpanavakava-bolonkoditra”.
“Sahaza kokoa ho an'ny Etazonia fa tsy i Rosia ny olan'ny fanavakavaham-bolokoditra”, hoy i Yurevich tamin'ny TJournal, mametraka fanavahana fa maro ny Amerikana mety hitolona vao mahatakatra [izany].
Ny studio-ntsarimihetsikan'i Yurevich, “Animaction Decks,” dia fantatra indrindra amin'ny andian-tsarimiaina Flash diso mahery setra antsoina hoe “Ninja Action” [Hetsika Ninja], izay ahitana adin'ny ninja tompon-toerana iray mandritra ny 10 -15 minitra ahitana famonoana ho faty amin'ny endrika fitetezana “lalao video”.
Namokatra lahatsary maro misy endrika politika ahitana olona fanta-bahoaka miady ao amin'ny Mortal Kombat ihany koa ny Animaction Decks. Hita ao amin'ny lahatsary ny ady misy maty sy velona eo amin'i Vladimir Potinina sy i Barack Obama, i “Motorola” mpisintak'i Donbass sy i Dmitry Yarosh nasionalista Okrainiana, ary ny hafa. Mampiasa feo tena izy i Yurevich hampisy tsirom-panebahana bebe kokoa.
Ohatra, rehefa hotolomin'i Potinina i Alexey Navalny mpitarika ny mpanohitra, dia nandohaliky ny faharesena avy hatrany ity farany, raha vao nanomboka ny ady. Rehefa nanandratra ny tanany hihora-pandresena i Potinina, dia nanambara ny feo avo hoe, “Mpangatra i Potinina,” fa tsy ilay mahazatra hoe“Nandresy [i Potinina]!” Nivandravandran'hagagàna i Potinina, ary avy eo izy nanao antso tamin'ny besandriny, izay nidaroka ilay mpanao filazana tsy hita amin'ny efijery, mandra-panitsiany sy nilazàny tamin'ny farany hoe, “fandresena tsy misy hokianina.” (Ireo fehezateny rehetra ireo dia teny fohy avy amin'ny lalao andohalambo navoakan'i Midway voalohany tamin'ny taona 1992 avokoa.)
Fampitandremana: ahitana sary mampivoarahontsana ny lahatsary eto ambany
Tamin'ny Marsa 2016, herinandro vitsy taorian'ny fanapahan-doha nataon'ilay Ozbeka mpitaiza zaza tamin'ilay ankizivavy efa-taona tao afovoan-tanànan'i Moskoa, dia namorona sariitatra fohy hafa izay tena naharomotra ny mpiray tanindrazana aminy efa nivoarahontsana tamin'ilay famonoana mampihoron-koditra i Yurevich.
Ny lohateny nomeny ny lahatsary dia hoe “Valibontana atao amin'ny mpampihorohoro any amin'ny firenen-tsamihafa,” izay anoritsoritany an'i Etazonia ho toerana itifirana avy hatrany ny “mpampihorohoro” raha vao taza-maso, i Eoropa ho toerana feno jihadista, ary i Rosia ho toerana tsy taitra amin'izay nosoritsoritany ho herisetran'ny mpampihorohoro.
Fampitandremana: ahitana sary mampivoarahontsana ny lahatsary eto ambany.
Naotin'ny tonia: Hita taty aoriana fa tsy salama ara-tsaina i Gyulchehra Bobokulova, ilay mpitaiza izay nanapaka ny lohan'ilay zaza efa-taona Anastasia Meshcheryakova, ka tsy jerena ho asam-pampihorohoroana ankehitriny amin'ny ankapobeny ny heloka bevava nataony.
Raha niresaka tamin'ny TJournal i Yurevich dia nilaza ny fijeriny fa tahaka sarimiaina ratsy indrindra nataony tamin'ny Animaction Decks ny “Valibontana atao amin'ny mpampihorohoro any amin'ny firenen-tsamihafa”. “Na dia niainga avy amin'ny zavatra tena nisy aza ny lohahevitra, dia tsy niezaka ny hamelabelatra izany tao amin'ny sarimiaina aho. Iraisana ny sarin'ny ‘mpampihorohoro’, fa tsy sary mivaingana,” hoy ny nolazainy.
Nilaza tamin'ny TJournal ihany koa i Yurevich fa nitsahatra tamin'ny fanaovana votoaty politika izy, raha tsy hoe nisy zavatra tena nanaitra ny fahazoany sary an-tsaina. “Ny andian-dahatsary nataoko indrindra, ny Hetsika Ninja, no iasako ankehitriny,” hoy izy, ary nampiany fa mety haharitra amam-bolana ka hatramin'ny taona maromaro ny famolavolany fizaran-tantara iray.